विद्यालय खोल्न ललितपुर महानगरको अनुमति, के छ काठमाडौको तयारी ? – सुनाखरी न्युज
विद्यालय खोल्न ललितपुर महानगरको अनुमति, के छ काठमाडौको तयारी ?
Posted on: December 10, 2020 - 7:53 am
सुनाखरी न्युज/ ललितपुर —
ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका विद्यालयलाई खोल्न दिने निर्णय गरेको छ ।
विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक शिक्षक समिति, वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी विद्यायलय खोल्न पाउनेछन् ।
महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालय खुला गर्ने अनुमति दिएको हो । ‘विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी संख्या समान छैनन्, यी सबै कुरा मध्यनजर गर्दै विद्यालय कहिलेबाट र कसरी सञ्चालन गर्ने निर्णय व्यवस्थापन समितिलाई दिएका छौं, त्यो प्रभावकारी हुन्छ,’ मेयर महर्जनले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यस बिषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।